Barruu goodayyaa kallatti sarjaa galmee ammee garamitti cuqaastu yookin harkistu kaasa. Barruu galchitu ofumaan haammamtaa issa jijjiira; bal'ina fi dheerina goodayyaaf akka toolutti (Barruu Eshiyaa dandeessisuun,akka sajoo kun akka of danda'u gargara). Galmee keessatti eessattiyyu cuqaasi ittaansuudhaan barruu kee barreessi yookin maxxansi. Dablataanis qaree bakka barruu ida'u barbaadeetti sochoosuu ni dandeessa, barruu goodayyaa harkisii ittaansuudhaan barruu kee barreesi yookin maxxansi.